Developers - YgnHome
တစ်ခန်းမကျန် အမြန်ဆုံး ရောင်းထွက်စေမည့် နည်းလမ်းအသစ်
Virtual Reality သုံးပြီးကြိုပွိုင့်တွေရောင်းနိုင်ပါပြီ
3D Floor Plan များရေးဆွဲပေးလို့ အရောင်းမြန်စေခြင်း
YgnHome နှင့်လက်တွဲရင် ရရှိနိုင်မည့် အကျိုး‌ကျေးဇူးများ
Quality Media to Attract More Customers
မတူညီတဲ့အားသာချက်တွေ ပေါင်းစည်းခြင်းရဲ့ ‌မထင်မှတ်ထားတဲ့ Achievements
နည်းပညာများဖြင့် ‌အောင်မြင်မှုကို လွယ်ကူစွာ ခုပဲရယူလိုက်ပါ
“အိမ်ခြံမြေများ အရောင်း၊ အငှားမြန်ဖို့ YgnHome ကိုဆက်သွယ်စို့…ဖုန်း 09-894 0990 77”
Foundation လုပ်ငန်း 30% ပြီးရင် ကြိုပွိုင့်စတင်ရောင်းချလို့ရပါပြီ…ဒါ‌ကြောင့် Sale နဲ့ Marketing Team ကိုပြင်ဆင်ချိန်ကြိုပေးသင့်လို့ ‌‌YgnHome နဲ့ခုပဲ ချိတ်ဆက်ရန် 01-667758 ကိုဆက်သွယ်ပါ
Time is Money and Teamwork is Everything!
ကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတိုင်းမှာ အချိန်ကအဓိကဖြစ်လို့ မတူညီတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေပေါင်းစပ်ပြီး ပူး‌ပေါင်း‌ဆောင်ရွက်ရင် မလွဲဧကန်အောင်မြင်မှာပါ
Promote Sale using Architectural Models
ဝယ်သူ‌တွေအကြိုက် နားလည်လွယ််သည့်စနစ်များဖြင့် ‌အရောင်းမြှင့်တင်ပေးခြင်း
Promote using Professional Media
YgnHome ရဲ့ Professional Media Service
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးပါမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း‌ရောက်ရှိနေသော မြန်မာများကပါ အသေးစိတ်သိရှိပြီး ‌အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်မည့်
စိတ်ချမ်းသာ‌သော Professional ဝန်‌‌ဆောင်မှုမှသည် အမြန်ဆုံး‌တိုက်ခန်းများအ‌ရောင်းထွက်ခြင်းဆီသို့
“အိမ်ခြံမြေများ အရောင်း၊ အငှားမြန်ဖို့ YgnHome ကိုဆက်သွယ်စို့…ဖုန်း 01-667758”
ကုန်ကျစရိတ် 2% (ဝယ်သူ ငွေချေမှသာ) အခမဲ့
ကြိုပွိုင့်/ဆောက်ပြီး အခန်းများကို မြန်မြန်ရောင်းချင်ရင်ကော?
ကြိုပွိုင့် (သို့)‌ ဆောက်လုပ်ပြီး‌ အခန်းများများကို ရောင်းချင်လိုအတွက် YgnHome ရဲ့ ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အချိန်တိုအတွင်းထိရောက်မှုရှိတဲ့ VIP Plan နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက် ရုံးခန်းကိုလာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ…